Dadka caanka ah oo lagu xanto doqonimo hadaba sidee noloshooda ku noqotay mid dhiirigelin leh?…. – Hagaag.com
Posted on 10 Nofeembar 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Si aan wax uga qabanno noloshan, waa inaan lahaano xoog nagu riixa si aan u gaarno himiladeenna, oo la yiraahdo “is-dhiirrigelin.” Waa fahamkeenna ah waxa nagu dhiirrigeliya inaan sameysanno waxyaabo naga dhigaya inaan si taxaddar leh uga fikirno oo aan horumarinno shakhsiyaddeena si loo hagaajiyo tayada nolosha.
Laakiin waxaay sii ahaataa in dadka iyagu is dhiirrigeliya ay leeyihiin xirfado wanaagsan oo adkaysi badan iyo isku kalsoonaan, kuwanuna waa kuwa na dhiirrigeliya ugu dambeyntii oo nagu dhiirrigeliya inaan ka faa’iideysanno waayo-aragnimadooda ku dhow mucjisooyinka.
Stephen King waa Qoraa Mareykan ah wuxuu ku dhashay Maine sanadkii 1947. Markii uu gaaray labo sano aabihii guriga ayuu ka baxay mana soo noqon, inkastoo aabahiisa ka cararay, hooyadiisna raashin u karin jirtay hey’ad u gargaarta dadka baahiyaha gaarka qaba, Wuxuu ku biiray jaamacadda Maine, wuxuu ku biiray ururka ardayda, wuxuuna qoray maqaallo taxane ah oo ku saabsan dagaalkii Mareykanka ee Vietnam.
King ayaa wuxuu sii waday shaqadiisa ilaa uu ka qalin jabiyay jaamacada 1970, isaga oo ka soo qaaday dhiig karka iyo aragga oo hooseeya iyo dhibaato uu ka qabay dhagta, wuxuu ka soo shaqeeyay dhowr xirfadood si uu ugu bixiyo qarashka waxbarashadiisa, wuxuu soo noqday waardiye, shaqaalaha dharka dhaqa iyo iibinta sheekooyinka gaagaaban ee joornaalada, sidaa darteed wuxuu awooday inuu guursado saaxiibtiis Tabitha 1971.
Sanadkii 1976, buuggiisa Carey ayaa la daabacay wuxuuna ka gaaray guul weyn, kadib markii uu ku dhawaaday rajo beel daabacaada oo ku tuuray dambiisha qashinka, kahor inta aanu xaaskiisa soo celin, waxayna isu rogtay mid ka mid ah filimada naxdinta leh oo laga cabsado ee ugu caansan.
Haddaba Stephen King waa mid ka mid ah qorayaasha ugu iibka badan buugaagtiisa adduunka oo haysta 350 milyan oo nuqul, inta badan sheekooyinkiisa waxaa loo rogay filimo heer sare ah, 61 riwaayad, lix ka kooban sheekooyinka runta ah, iyo wuxuu qoray ku dhawaad ​​200 sheekooyinka gaagaaban ah.
Larry Ellison, waa ganacsade Mareykan ah isla markaana ah aasaasaha Shirkada Oracle, ayaa aabihiisa soo korsaday u tiriyey inuu yahay dadka guul daran. Waxaa laga eryay kulliyadda laba jeer kadib markii hooyadiis soo korsatay ay dhimatay. Laakin xiisaha uu u qabay tikniyoolajiyadda iyo ku kalsoonaanta naftiisa ayaa ka dhigtay inuu ka mid noqdo caalamka barnaamijyada tekniyoolijiyada, wuxuu ku tabarucay malaayiin doollar howlaha samafalka ah ee waxbarashada iyo cilmi baarista sayniska.
Ellison wuxuu ku dhashay magaalada New York sanadkii 1944, mana uusan arkin aabihiis, ka dib markii uu ku dhacay cudurka oof wareenka ka hor intuusan dhameysanin sanadkiisii ​​ugu horreeyay (sagaal bilood) hooyadiis waxay u dirtay nin qaraabo la ahaa oo kunoolaa koonfurta Chicago, si ay u korsadaan, oo aan ka daalin u sheegista wiilka in uu yahay qof lunsan oo uusan waxba ogeyn, lama uusan kulmin hooyadiis ilaa uu 48 jirsado.
Sanadkii 1966 wuxuu aaday California si uu uga shaqeeyo barnaamij kumbuyuutar ahaa, ilaa uu aasaasey Oracle 1977. Bishii Oktoobar 2019, Forbes wuxuu ku qiimeeyay qofka afraad ee ugu taajirsan Mareykanka iyo qofka lixaad ee adduunka ugu taajirsan, isagoo leh hanti dhan $ 69.1 bilyan.
Jack Ma, bilyaneerka Shiinaha ee aasaasaha barta ganacsiga Alibaba, kaasoo laga hayo inuu yiri “waligaa ha quusan”, wuxuu ku dhacay dugsiga hoose laba jeer, dugsiga dhexe seddex jeer, ogolaanshaha gelitaanka jaamacadda seddex jeer, iyo aqbalaadiisa arji Harvard toban jeer. wuxuu galay Jaamacadda Hangzhou oo dowlada Shiinaha iska leh, kadib markii uu ka qalin jebiyey wuxuu ku guuldareysatay inay helo shaqo soddon jeer. Nasiib daradii ugu weyneyd waxay aheyd markii uu shaqo ka doontay laanta Kentucky ee Shiinaha iyagoo 23 qof ah, dhammaantoodna waa la shaqaaleeyay marka laga reebo isaga.
Laakiin guuldarradiisa soo noqnoqotay ayaa Jack siiyay is-dhiirri gelin si uu ugu adkaysto mashaqada, isaga oo Macalin Ingriis ka bilaabay shaqadiisa, mushaarkiisa $ 12 bishii, ilaa uu fursad u helay in uu booqdo Maraykanka dabayaaqadii 1990-dii, si uu ugala hadlo asxaabtiisa fikradda ganacsiga elektroniga, in kasta oo aanu laheyn aqoonta software-ka iyo sayniska kombiyuuterka, wuxuu ku soo noqday waddankiisa si uu u dhiso Shirkadiisa caalamiga ah ee Alibaba.
Maanta, Jack, waa ninka ugu taajirsan Shiinaha, haddana waa kan 21aad ee ugu taajirsan adduunka, wuxuu haystaa hanti dhan $ 38.9 bilyan sanadka 2019, wuxuu ka baxay boqortooyadiisa Ali Baba, kaas oo shaqaaleeyay in ka badan 100,000 oo qof, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, oo qiimaheedu uu yahay 460 bilyan oo doollar, waxay da’diisu tahay 55 jir.